Pants akpụkpọ anụ - Ụdị niile na -alaghachi maka ọdịda | Bezzia
Ụdị uwe ogologo ọkpa akpụkpọ anụ niile na -alaghachi maka ọdịda
Susana godoy | 08/10/2021 10:07 | Ụdị
Pants bụ otu n'ime uwe kpakpando ọhụrụ anyị ma ya. Ọ bụ eziokwu na a bịa n'ihe gbasara oyi, akwa na -agbanwekwa ka anyị nwee ike kpoo ọkụ dịka anyị chọrọ. Mana enwere nke na -anaghị agbanwe n'ezie n'ihi na oge ọ bụla ọ na -eso anyị abịa, anyị na -enwekwa obi ụtọ maka ya: Ogologo ọkpa akpụkpọ anụ.
A na -edobe ha dịka otu n'ime uwe ndị ahụ dị mkpa n'ihi na enwere ya anyị ga -emepụta ụdị na ụdị niile. Ka anyị wee soro ha gaa oge kacha mma n'ụbọchị mana kwa abalị. Yabụ, anyị na -ahụ na ọ bụ uwe kpakpando na na ugbu a naanị anyị ga -emegharị ya na ndụ anyị. Anyị ga -amalite?
1 Pantụ akpụkpọ anụ kwụ ọtọ
2 Pantụ akpụkpọ anụ leggings akpụkpọ anụ
3 Ogologo ogologo ụkwụ ogologo na agba
Pantụ akpụkpọ anụ kwụ ọtọ
Enwere ọtụtụ ụdị uwe ogologo ọkpa anyị nwere n'ihe gbasara ọnọdụ.. N'ihi na agbanyeghị na anyị amaralarị na anyị hụrụ nsonaazụ nke akwa dị ka nke a na -enye anyị, ugbu a anyị ga -ahụ ka anyị ga -esi eyi ya na oge ọ ga -abụ. Ọ gaghị abụ ihe mgbagwoju anya na nhọrọ niile ụlọ ahịa ejiji na -enyerịrị anyị. N'ihi ya, ụlọ ahịa dị ka Zara na -abụkarị ndị mbụ na -ahọrọ igosi anyị ihe kacha mma mgbe niile na nke a, ọ bụ uwe ogologo ọkpa.
Ọ naghị esi ike nke ukwuu dịka anyị nwere ike iche n'echiche, mana site na ịkpụ ahụ dị oke mma nke na -enye gị ohere ịnụ ụtọ ngwụcha ụbọchị na oge pụrụ iche. Akwa ukwu bụ ihe ọzọ dị ukwuu rụpụtara ka anyị nwee ike nweta nkasi obi anyị chọrọ. N'ihi ya, n'otu aka, ọ bụ ngwụcha kachasị aga nke ọma n'oge a. Mana na nke ọzọ, yana ndị nwere oghere na nkwonkwo ụkwụ yana ndị na-ahapụrụ anyị nkọwa nke seams ma ọ bụ akara akara nke ọma na mpaghara ihu. Nke a ga -enye gị nghọta karịa maka ụdị ọfịs ahụ, dịka ọmụmaatụ.
Pantụ akpụkpọ anụ leggings akpụkpọ anụ
Obi abụọ adịghị ya, a ga -enwe ụdị ejiji na -eche anyị ma dịka nke a, ịgba ụkwụ ga -abụ ihe pụrụ iche. N'ihi na ọ bụrụ na anyị echee echiche, a ga -ejikọ ya na ụdị dị iche iche mana ha niile kacha nwee ntụsara ahụ. Ị nwere ike họrọ ịgbakwunye akwa na uwe elu nwanyị, nke a na -eyi oge a. Ma ọ bụ, nọrọ na akwa oyibo sara mbara ma dị ogologo nke nwere ike kpuchie akụkụ ahụ gị. A pụkwara ịhụ leggings na akpụkpọ ụkwụ ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ nkwonkwo ụkwụ yana akpụkpọ ụkwụ egwuregwu. Nke ahụ bụ, dabere na akwa uwe ị họọrọ, ị nwere ike jikọta ha dịka masịrị gị.
Ogologo ogologo ụkwụ ogologo na agba
Anyị enweela abụọ maka otu, maka na agbanyeghị na a na-ahụ mmetụta akpụkpọ ahụ na agba ojii, ọ gbagokwa. Yabụ na ọ ka mma mgbe niile inwe ike enwe novelties na nkecha anya. Agbanyeghị na agba ojii nwere ike ijikọ anyị na ndị ọzọ niile, anyị enweghị ike ịhapụ ụfọdụ ndo dị ka ọbara ọbara. N'ihi na anyị maara na ọ bụ nke kacha nwee oke agụụ na ha ga -enyekwa ike n'oge oyi. N'ihi ya, ọ ga -anọnyere anyị mgbe niile. N'ezie, na -ekwu maka ndo, ụda aja aja bụ ihe ndị ọzọ kachasị mkpa maka oge ọhụrụ a.
Yabụ, ị nwere ike họrọ ugbu a n'etiti agba ojii, ọbara ọbara, aja aja na n'ezie ị ga -ahụkwa akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na -adịghị mma. Ha niile ga -anọ n'akụkụ gị iji nye gị ụdị ejiji kacha mma. N'okwu a, a hapụrụ anyị uwe ogologo ọkpa na mgbakwunye na inwe ụkwụ sara mbara. Ọ dị ka echiche nke oge ndị ọzọ na -alaghachi idozi na ọnọdụ nke oge a. Yabụ, ịnweghị ike ịnọ n'enweghị uwe ogologo ọkpa akpụkpọ anụ, n'agbanyeghị ebe ị lere anya. Ọ bụ uwe kpakpando gị nke oge?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » ejiji » Ụdị » Ụdị uwe ogologo ọkpa akpụkpọ anụ niile na -alaghachi maka ọdịda
Ndụmọdụ 3 iji kwụpụ na ekwentị mkpanaaka gị